သတိရသင့်သည့်အချက်ခြောက်ချက် - သင့် ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်သည်
(မ FAP နှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်) တစ်ဦးတစ်လတစ်ဦးဆိုတဲ့ funk တစ်နည်းနည်းခဲ့။ အသစ်က Batman ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နောက်ဆုံးတညဉ့်ဗျာဒိတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာနည်းနည်း incoherent ခဲ့ပေမယ့် Batman ၏အစွမ်းသတ္တိ, Bain ငါ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်ခံ့စေသည်ဘာကိုစဉ်းစားတယ်, ပြီးတော့ extension ကိုအသုံးပြုပုံဘာကိုအလေ့အထကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့လူတွေပါစေ။
ငါခေတ်သစ်အမျိုးသားများတသမတ်တည်းကောင်းစွာမလုပ်ဆောင်သောအရာခြောက်ခု၏စာရင်းတစ်ခုနှင့်အတူငါလာ၏။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ခွန်အားနှင့်မပတ်သက်ပါ။ ဒီမှာစာရင်း / ဂါထာပါပဲ။ အောက်ကအချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်။
ဒီခြောက်ခုကိုမှန်အောင်လုပ်ပါ၊ မင်းကလူအများစုထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘ ၀ ကိုရှင်နေမှာပါ
မနေ့ညကဘယ်လောက်အိပ်ခဲ့တာလဲ လွန်ခဲ့သောလကကျွန်ုပ်သည်နံနက် ၇း၀၀ နာရီတွင်နိုးကြားခဲ့ရသည်၊ သို့သော် 7: 00-12: 00 အထိအိပ်ရာမဝင်ရ။
၎င်းသည်စာရင်းရှိအရာအားလုံးကိုသက်ရောက်စေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်နေပါက၊ အစာမစားရန်သွေးဆောင်ခံရလိမ့်မည်၊ သင်၏ဓာတ်လှေကားများပိတ်သွားပြီးသင်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပေ။
ထို့အပြင် fap ၏သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်နေရသောသင်တို့အတွက်သင်ပင်ပန်းနေလျှင် ပို၍ ခက်ခဲသည်။
သင်သည်သင်၏ ABS တွေ့မြင်နိုင်ပါသလား?
အကယ်၍ မရရှိလျှင်၊ သင်သည်သင်၏ခါး၌အပိုအဆီတင်နေသည်။ သငျသညျ "အဆီ" မကျမည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်သင်ကသင်၏စံပြအလေးချိန်အထက်ပါပဲ။ ၎င်းသည်အလွန်ဆိုးရွားမည်မဟုတ်သော်လည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီပိုလျှံသယ်ဆောင်ခြင်းသည်သင်စားသုံးသင့်သည်ကိုမစားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
သင်ဟာအနောက်တိုင်းအမျိုးသားအများစုလိုပဲ၊ လူများသည်စံပြအစားအစာနှင့်မတူကြပါ၊ သို့သော်စီစစ်ထားသောအစားအစာများသည်သင့်အတွက်မကောင်းဟုလူတိုင်းကသဘောတူကြသည်။
ငါသည်ဤလတွင်အလေးမခြင်းအစားအစာအစီအစဉ်ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏ abs ကိုကောင်းစွာမြင်နိူင်သည်။ ငါတစ်နေ့တာအတွက်စွမ်းအင်လျော့နည်းရှိသည်။ ငါအသုံးမပြုတော့တဲ့အစားအစာအတွက်ပိုက်ဆံပိုကုန်တယ်။
လုံလောက်သော။ သင်တို့အဘို့အကောင်းဖြစ်ကြောင်းအရသာအစားအစာများကိုများများရှိပါတယ်။ အစားရှိသူများကိုစားကြလော့။
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေးလံသောအရာများဖြင့်တည်ဆောက်ရန်တည်ဆောက်ထားသည်။ အားကစားခန်းမကိုသွားပါ။ မင်းလူသစ်ဖြစ်လိမ့်မယ် နှင့်အမျိုးသမီးများ, ရုတ်သိမ်းရေးလည်းသင့်ကိုကူညီပေးသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းအတူအားကစားရုံကိုရှာပါ, သင်၏တိုးတက်မှုအသီးအသီးယလေ့ကျင့်ခန်းကိုခြေရာခံ။ နည်းနည်းပိုပြီးဦးချင်းစီအချိန်ရုတ်သိမ်းပေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကီထိုင်, ခုံတန်းလျားစာနယ်ဇင်း, deadlifts, overhead စာနယ်ဇင်း, နှင့်ချင်း ups နှစ်ခုလေ့ကျင့်ခန်းများအကြားတစ်ဦးလျောက်ပတ်စလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်, အုပ်စုခွဲဖြစ်ကြသည်။
ဒီဟာကကြီးလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါရတော့မယ် အားကြီးသော။ ငါကအားကောင်းနေတယ်၊ ​​ငါကြည့်ရတာထက်တောင်အားကောင်းနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လည်ပင်းကသင့်ကိုခွန်အားပေးတယ်။ အဆိုပါကြည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်ပမာဏကောင်းသည်။ Starting Strength ကသင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင်ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ကသင်မှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သင်ပေးသူသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရသင့်သည်။
ငါ "လေ့ကျင့်ခန်း" ထက်ဒီ "lift" ဟုခေါ်အကြောင်းပြချက်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် cardio နှင့်ကွဲပြားခြားနားခြင်း၊ သင်ဘယ်တော့မှ ၅၀% ပိုမိုအားကောင်းလာပါက၎င်းသည်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုသင်မသိပါ။
သင်အကျင့်ကိုကျင့်ရပါမည်အဘယ်အရာကိုငါသိ၏။ , သင်သည်ထိုသူတို့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, သင့်အသက်တာ၌ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုလုပ်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောတာဝန်များကိုရှိပါတယ်။
သင်တို့မူကား၊ သူတို့ပျင်းစရာကောင်းတာပေါ့ သင်ကျရှုံးနိုင်မှာကိုသင်စိုးရိမ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်
အရေးကြီးသောအလုပ်အတွက်အချိန် Make နှင့်ကစားခြင်းကနေခွဲထုတ်စောင့်ရှောက်။ တခါမှာနှစ်ဦးစလုံးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသငျသညျမပွုပါပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီအပေါ်မှာလူများအတွက်အထူးသဖြင့်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါသည် / r / nofap။ ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပျက်စီးသွားကြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူအများစုသဘောတူထားသည့်သာမန်လူ့ဆက်ဆံရေးတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ။
PMO ကိုမိန်းကလေးစစ်စစ်တွေနဲ့အစားထိုးနေတယ်။ သင်ဒီမှာရှိလျှင်သင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီ။ သင်ပြtheနာကိုဖယ်ရှားနေသည်
ဒါပေမယ့်အနုတ်ကမလုံလောက်ဘူး သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌တစ်စုံတစ် ဦး ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အပြင်ထွက်ပြီးသူမကိုရှာပါ။
သငျသညျအသေးစတင်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်ရဲ့ Hi လို့ပြောသွားပါ။
သင့်ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်တဦးတည်းလက်ကိုသွင်း, သင်၏အစာအိမ်အပေါ်တဦးတည်း။ သူတို့ရွှေ့သလား?
သင့်ရဲ့ရင်ဘတ် မပေးသင့်ပါတယ် အပြောင်းအရွေ့, သင်၏အစာအိမ် သင့်.
ဤသည် diaphragmatic အသက်ရှူဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာပိုပြီးအောက်စီဂျင်မှဦးဆောင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြေစေပြီး။
က Short, ရေတိမ်ပိုင်းအသက်ရှူယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအလားအလာခြိမ်းခြောက်မှုကြုံတွေ့ရသည့်အခါစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ရန်ပွဲသို့မဟုတ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်တုံ့ပြန်မှု activated နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ရှူအရေးယူအာရုံစိုက်ဖို့ရေတိမ်ပိုင်းဖြစ်လာသည်။
ဒါကိုစမ်းကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည်တရားအားထုတ်ခြင်းပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သင်လမ်းလျှောက်နေစဉ်တွင်အသက်ရှူခြင်းကိုအာရုံစိုက်ပါ။
ငါနောက်ဆုံးညဥ့်မြေအောက်ရထား၌ဤကြိုးစားခဲ့, ငါငါ့ကိုလှည့်ပတ်ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအံ့သြလေ၏။ ဘူတာရုံ၏လူများ, မီး, အသေးစိတ်။ အသက်ရှူငါ့ဦးခေါင်းအတွင်းမှလောကီထဲကငါ့ကို ယူ. ပြန်အစစ်အမှန်လောကသို့အကြှနျုပျကိုထားတော်မူ၏။
၎င်းတို့သည် fapping သို့မဟုတ် porn စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ သို့သော် nofap သည်တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာမျှမတူပါ။ မင်းဒီမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဘဝမှာအရာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမင်းသိထားလို့ပါပဲ။
သငျသညျအမိန့်တွင်ဤအမှုအရာရှိလျှင်, fapping မဟုတ်အလွန်လွယ်ကူဖြစ်လာသည်။
ငါသညျဤအမိန့်မှာသူတို့ကို fix မယ်လို့:
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမတောင်းဆိုခင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်စေရမယ်။ မိန်းကလေးကမင်းကိုမပြည့်စုံစေဘူး။ သင်ကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးလျှင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရနိုင်သည်။
သင်ကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံအောင်မထား အလို့ငှာ မိန်းကလေးယူပါ ဒါဟာသာယာသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပဲ။
ငါမနေ့ကတိုင်အောင် flatline တစ်နည်းနည်း၌ရှိ၏။ ပြီးခဲ့တဲ့ညမှာကောင်းမွန်စွာအသက်ရှူ ၀ င်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့ libido ပြန်လည်အသက်ဝင်လာတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။